Kadib Sadexleydii Alvaro Morata Chelsea oo qarka u saaran in ay jabiso Record u yaalay Arsenal? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Kadib Sadexleydii Alvaro Morata Chelsea oo qarka u saaran in ay jabiso Record u yaalay Arsenal?
(24-9-2017) kadib Guushii weyneyd ee ay Gaartay Chelsea kulankii Stoke City iyo Sadexleydii uu dhaliyey Alvaro Morata kooxda Macalin Antonio Conte ayaa qarka u saaran in gaaraan Record u yaalay kooxda Arsenal oo ay London kawada dhisanyihiin.
Alvaro Morata oo ay dhawaan ka soo qaateen Real Madrid ayaa Noqdey Cayaaryahankii 17 aad ee Chelsea u dhaliya Goolasha Sadexleyda ah Horyaalka Premier League dalka England.
Chelsea ayaa waxaa ka sareeya oo kaliya Naadiga Arsenal oo ay 19 Cayaaryahan oo kala duwan u dhaliyeen Sadexley Horyaalka Premier League tan iyo Markii Magacaas loo bixiyey Sanadkii 192 dii Waxaana Chelsea ay gaari doontaa marka 2 Xiddig oo kale ay u dhaliyaan Sadexley markaas oo ay Gaari doonaan Recordka Cajiibka ah ee Arsenal u yaala.